Baqattoonni Sudaan Kibbaa akkamiitti dinagdee Ugaandaa akka cimsuu danda’an - BBC News Afaan Oromoo
Baqattoonni Sudaan Kibbaa akkamiitti dinagdee Ugaandaa akka cimsuu danda’an
Goodayyaa suuraa Peniinaan Sudaan kibbaa keessaatti mana refeenssa qabdi turte
''Jalqaba irratti maallaqa argachuun rakkisaa waan ta'eef, daldala kam iyyuu jalqabuun salphaa miti,'' jetti Peniinaan - dubartiin lammii Sudaan Kibbaa kan ijooliee ishee afurii waliin baqachuun gara Ugaandaa seente.
Daldaltoonni baay'een waan walfakkaata sitti himu. Egaa nama baqataa ta'ee mooraa baqattootaa keessa Kaaba Ugaandaa jiraatuuf ammoo waanti kun hagam rakkisa akka ta'e yaadi.
''Baqataa ta'anii maallaqa argachuun salphaa miti,'' jechuun kan itti fufte dubartiin kun.
''Ni argita, waan akka boloqqee isa kennamuuf gurguruu, dibata (Zayitii) nyaataa si kennuunis kafaltii raawwatu malee homaa hinqabani. Maallaqni hinjiru.'' Jetti.
Peniinaan abbaa warra ishee dhiiftee biyya akka baqatu kan ishee kakaasee dubartiin tokko mucaa ishee waliin wayita ajjefamuutu erga argite booda ture.
Jiraachuuf waan isheen gotu
Baqattoota Sudaan Kibbaa miliyoona tokko ol Ugaandaa keessatti argaman keessa naannoo % 85 kan ta'an dubartoota fi daa'imman akka ta'an Dhaabata Mootummaa Gamtoomanitti, Koomishinii Olaanaa Dhimma Baqatootaa ni dubbata.
Baqatoonni Itoophiyaa fi Ertraa irraa ta'an hedduunis biyya Ugaandaa keessa akka jiraatan ni beekama. Tokko tokkoon isaaniis waggoota hedduuf biyya sana keessa jiraataniiru.
Namoonni kun UNHCR, dhaabbilee gargaarsaa idla adduunyaa adda addaa fi mootummaa Ugaandaa irra gargaarsa ni argatu.
Goodayyaa suuraa Mana rifeensaakoo keessa hojjechuun koo fayyaa koof ille na fayyadeera jetti Peniinaan
Lafti ni kennamaaf - lafa bosona irra ciranii mana irratti ijaarataniifi qotanii waan nyaatan omishataniidha.
Pilaastikaa babal'aa ta'e kan mana ittiin ijaarachuu dandaaniis ni kennamaaf. Meeshaan ittin nyaata bilcheessanis minaan nyaata waliin ni qoodamaaf.
Haa ta'u malee, dhabachuun gargaarsa idli adduunyaa irraa kan madde bara darbe keessa minaan nyaataa ji'a ji'aan kennamu irra citeera. Akka baqattoota baay'ee haasofsiifnetti nyaati kennamaa ture ji'an isaan gahaa akka hinturre himu.
Kun immo Peniinaaf carraa gaarii ta'eera.
Wayita Yei, Sudaan Kibbaa turte ogummaa rifeensa hojjechaa horateetti. Ogummaan kun ishee waliin dhufe.
Kanaan duras bara 1990'oota keessa wayita Sudaan kaabaa waliin wal waraanaa turame baqattummaadhaan Ugaandaa keessa turte jirti.
Kana jechuun ammo jiruu fi jireenya Ugaandaa keessa ni hubatti jechuudha. Namoota naanno keessaas hiriyoota ni qabdi.
Keessattu hiriyaashee tokko turte kan akka mana rifeensaa bakka qubsuma baqataa Imiveepii keessatti akka eegaltuuf ishee gargaarte.
Haa ta'u malee, hojiin kun galii akka hinqabne dubbati.
Dubartoonni ishee biratti rifeensa hojjetifachuuf dhufuunis kan kafalan minaaniifi dibata (zaayiti) kenuufiin waan ta'eef, yeroo tokko tokko waan ishee barbaachisu bituuf maallaqa kan argatu warreen kana gurguruun qofa.
''Mal gochuu dandeenya? Haalli keessa jirru kana fakkaata.
''Daldalli finiinaa jira''
Utuu achirra hinfagaatiin dargaggoo tuullaa cilee (kasalaa)n marfame tokkootu jira. Kasalli baqatootaniis ta'e lammiilee Ugaandaa bal'inaan kan itti fayyadamaniidha.
''Daldallii mooraa baqqatoota keessatti finiinaa jira,'' jedha Abduul Kaariin Alii, lammi Ugaandaa kan umurii 25'n tokko.
Magaalaa Aru'aa jedhamtuu fi naanno sanatti argamu irraa dhufe .
Innis akkamitti baqqatoonni lammii Sudaan Kibbaa kasala itti hojjetanii fi inni immoo isaan irra bituun magaalaa irraa dhufetti geesuun bu'a gaarii argachuun akka gurguru hima.
Goodayyaa suuraa ''Daldala keessatti al takkaa takka ni milkoofta yeroo biroo ammo ni kasaarta,'' jedha Abduul Kariim Alii
''Kasalli magaala keessatti baay'ee mi'aadha. Garuu, haala as jiru irraa kan ka'e gatii rakasaatiin gurguru,'' jedha waa'ee baqattoota wayita haasa'u.
''Namoonni muraasni waan UNHCR irraa ittiin jiraatuuf kenamuuf tokko tokkoo ni gurguru. Kanneen akkanaa irraa ammoo bu'aa guddaa arganna.''
Haa ta'u malee, poolisiin mootummaan Ugaandaa meeshaa baqataa UNHCR'iin kennamuuf namoota irra bitan wayita argan qabanii waan hidhaniif daldalli akkanaa kun balaa gudda qaba.
''Ta'uus nutis hinuma binna,'' jechuun dubbata.
''Daldala keessatti yeroo takka takka ni injifatta; yeroo takka takkammoo ni kasaarta.''
Akkaataa innni itti ibsu qalbii namaa hata. ''Mee naanna'ii ilaali; gabaa kana keessatti nu hundumtuu namoota bakka bakkarra dhufnee dha, Sudaan Kibbaa fi Ugaandaa, garuu jireenya mo'achuu fi wayyeefachuuf waliin daldalla,'' Jedhe.
Duguma, naannoon dirree Ugaandaa Kaabaa jijiiramaa jira.
Mallattoo nageenyaa hanga tokko Sudaan Kibbaa keessatti yeroo dhihootti deebi'uu maluun, baqatoonnis ofii isaaniif jireenyaa haaraa jalqabuuf.
Namoonni lammii Ugaandaa muraasni hanga tokko kana irra fayyadamaa jiru.
'Obbolaa lamaan qarooma barnoota abbaa irraa dhaalan'
Dubartii osoo hin baratiin wal'aansa baqaqsanii hodhuu gaggeessan
Komediyaaniin US lammummaa Ertiraa argatte
Barattoonni meedisiinii Yuunivasrsiitii Goondar mooraa gad lakkisanii bahan
Saayintistoonni Chaayinaan kemikaala dhorkame gadhiisuu ishii bira gahan
Siidaan Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu eebbaaf qophaa'e
Botsiwaanaan uggura adamoo arbaa kaaste